Nuradiin Farah: Soomaalidu waxay iga codsadeen in aanan ku hor ceebayn Swedishka - iftineducation.com
iftineducation.com – Nuradiin Farah oo ah qoraaga Soomaaliyeed ee caanka ah ayaa wareysi uu siiyay telefishinka Sweden u sheegay in markii uu ka qeyb galay kulan ka dhacay magaalada Malmö isbuucii hore ay Soomaalida qaarkood u sheegeen in uusan ku ceebeyn Swedishka hortooda. Nuradiin Farah oo u muuqda nin ay aad u jecelyihiin reer galbeedka ayaa dood weyn ka dhaliyay Sweden.
Qoraaga ayaa markii uu Malmö tagay waxa uu Swedishka u sheegay in Soomaalida qurbaha ku nool ay noqdeen kuwo xagjiriin ah oo diinta ku dhagan, isagoo isku tilmaamay Muslim cilmaani ah oo aan diinta ku dhaganayn. Waxa uu intaasi ku daray in cayrtu ay dhibaato u keentay Soomaalida Sweden. Isagoo ula jeeda in Soomaalidu halkii ay ka shaqaysan lahaayeen ay ku tashanayaan in dowladu cayrta siiso.
Hadaladaas ayaa waxaa ka carooday Soomaali badan oo cadeeyay in uusan ninkaan matalin Soomaalida ee uu ka hadlay aragtidiisa gaarka ah. Wareygsiga cusub oo uu siiyay telefishinka SVT barnaamijka Babel ayuu kaga hadlay arimo badan iyo in uu jecelyahay in uu dood abuuro. Waxa uu sheegay in Soomaalidu ay ku xooganyihiin cambaareynta balse ay ku liitaan amaanta.
WAR DEGDEG AH fanaanad soomaaliyeed Caan ah oo Masraxa Ku geeriyootay Daawo Video